Wasiirka Cadaaladda XFS : “Soomaaliya waa in ay heshaa Qareenno difaaca”. | Dayniile.com
Home Warkii Wasiirka Cadaaladda XFS : “Soomaaliya waa in ay heshaa Qareenno difaaca”.
Wasiirka Cadaaladda XFS : “Soomaaliya waa in ay heshaa Qareenno difaaca”.
Wasiirka Cadaaladda XFS Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa sheegay in Soomaaliya looga baahan yahay in ay daboosho baahida ay u qabto qareenno caalamiga ah oo ka difaaca kiisas lamid ah dacwadda Badda.
Jaamac waxa uu tilmaamay in Soomaaliya ay difaaceen Qareenno Khibrad leh oo Ajaanib ah kuna baxay qarash, kaalinta Soomaalida ayuu ku tilmaamay in ay tahay fursad u furan si ay uga soo muuqdaan Fagaarayaasha.
“Xaalad weliba oo dhacda waxaa laga barqaa Qiso, Ka wasaarad ahaan waa in aan diyaarsanaa Qareenno Soomaali ah oo fagaarayaasha Caalamiga ah ka diriri kara ay u baahan tahay Jamhuuriyadda Federaalka” ayuu yiri Wasiirka Cadaaladda XFS.
Xukuumadda uu katirsan yahay ayuu usoo jeediyay in ay xoogga saarto sidii ay u diyaarin lahayd Xeer ilaaliyaal & Qareenno ehel u ah difaaca Dacwadda Badda oo la’aantood ay fududahay in dhabbaha lagaaga tago sida uu hadalka u dhigay.
Keliya waxa lagu tartamayo oo ah Cilmi & waaya-aragnimo waxa uu soo jeediyay in ka faaiideysiga fursadaha muuqda ay muhiim u tahay guud ahaan Soomaalida gaar ahaan Dadka daraaseeyay Sharciga.
“Tartanku ma aha Xabad & dagaal Balse waa Cilmi iyo wixii aad baratay, haddii aadan heysan qareenno iyo khubaro sharci yaqaanno ah waxaa ku dardaraya Cadowga, maanta waxaa ilaah mahadi ah in aan helnay qareenno aqoon u leh oo qarash ku bixinay” ayuu yiri Wasiirka Cadaaladda Soomaaliya.
Previous articleWeerar Tiro madaafiic ah oo lagu qaaday Saldhig ay ku sugan yihiin Ciidanka Puntland
Next articleBooliska UK oo shaaciyeen Magaca Ninka Soomaaliga ah ay ku tuhmeen Dilka Xildhibaan David Amess.
The death toll from a suspected arson at a Japanese clinic...
With the death of a lady in her 20s, the death toll from a suspected arson attack at a mental facility in Japan has...
Taliyaha Ciidamada Booliiska Harammcad farxaan Qaroole oo Wacad ku maray in...
Bangiga Adduunka oo saadaaliyey dhaqaalaha dunida inuu hoos u dhac uu...
For the new San Siro, Milan clubs have chosen a ‘Cathedral’...
𝗠𝗨𝗤𝗗𝗜𝗦𝗛𝗢 𝗠𝗜𝗬𝗔𝗔𝗗 𝗞𝗨 𝗡𝗢𝗢𝗦𝗛𝗔𝗛𝗔𝗬 ?
Cali Gudlaawe oo Duubabka Dhaqanka Hir-Shabeelle kala hadlay Arrimaha doorashooyinka
Kenya oo qabatay rag ku eedeysan Al-Shabaabnimo oo dhawaan ka baxsaday